Umul-raaca Hooyooyinka: Waa dhibaato laga baaqsan karo - MSF Gudaha Soomaaliya- Helitaanka daryeel Caafimaad
©MSF Hooyo iyo cangeed
Médecins Sans Frontières ayaa soo bandhigeysa hababka caafimaad ee lagu baajin karo geerida hooyooyinka ee timaadda marka ay dhibaatooyinka bani’aadamnimadu jiraan
Sydney, 8 Maarso 2012: Munaasabadda Maalinta Haweenka Adduunka daraaddeed ayaa ururka
bani’aadamnimada ee caafimaadka ee caalamiga ah, Médecins Sans Frontières (MSF) waxaa uu hoosta ka xarriiqayaa xaqiiqada ah in haween aad u tiro badan ay weli dhimanayaan geeri laga baaqsan karey taas oo ah umul-raaca hooyooyinka.
Waraaqda warbixinta ee MSF, “Umul-raaca Hooyooyinka: Waa dhibaatooyin laga baaqsan karo” ayaa faahfaahineysa sida
marka daryeelka degdegga ah ee uurreyda iyo umulaha la siiyo haweenka ay haystaan dhibaatooyinka degdeg ah iyo kuwo dabadheer oo bani’aadamnimada ay saameyn toos ah ku yeelan karto ayna badbaadin karto nafta haweenka.
Ka dib markii ay sanado ballaarineysey barnaamijyadeeda ay wax uga qabaneyso baahiyaha haweenka uurka leh, ayaa MSF waxaa ay hadda dooneysaa in ay dareenka dadka ku soo jeediso sida uu u yar yahay daryeelka uurreyda iyo umulaha ee lagu bixiyo meelaha ay dhibaatooyinku ka jiraan. Waraaqda ayaa eegeysa xaaladda haweenka uurka leh ee 12 dal oo ay MSF ka shaqeyso, dalalkaas oo ay ka mid yihiin Pakistan, Soomaaliya, Koonfurta Suudaan iyo Haiti, waxaana ay muujineysaa sida loogu baahan yahay gargaarka caafimaadka ee degdegga ah, gaar ahaan marka uurka ay weheliyaan dhibaatooyin/cudurro kale.
“Waxaan ogsoonnahay in toban iyo shan boqolkiiba dhammaan haweenka uurka leh ee guud ahaan dunida ay la soo gudboonaadaan
dhibaatooyin/cudurro dheeri ah,” ayaa ay tiri Kara Blackburn, oo ah La-taliyaha Caafimaadka Haweenka ee MSF. “Haweenkan waxaa ay u baahan yihiin in ay helaan daryeelka uurreyda iyo umulaha ee degdegga ah oo ah mid tayo leh haddii ay ku nool yihiin Sydney, Port-au-Prince ama Muqdishu – xaqiiqada jirtana waa mid keliya haddii la joogo cusbitaal casri ah oo magaalo caalami ah ku yaalla ama meel uu
iskahorimaad ka jiro, xero qaxooti ama haddii la hoos fadhiyo bac fidsan ka dib markii uu dhacay dhul-gariir wax burburiya.”
Maalin kasta, qiyaastii 1000 haween ah ayaa umul-raaca ama u dhinta dhibaato/cudur la xiriira uurka. Haseyeeshee, marka gacan laga helo umulisooyin xirfad leh, oo la helo dawooyinka iyo qalabka loo baahan yahay, ayaa nafta haweenka iyo tan ilmahooda
dhasha ah la badbaadin karaa.
Marka uu ilmuhu dhalanayo waa waqtiga ugu muhiimsan ee la badbaadin karo nafta hooyada iyo ilmaha dhalanaya, iyada oo badi geerida hooyooyinku ay dhacdo ka hor inta aaney dhalin, marka ay dhaleyso iyo ka dib marka ay dhasho, taas oo badanaaba ay sababaan
dhibaatooyin aan la sii saadaalin karin. Maaddaama ay tahay urur caafimaad oo hawlaha degdegga ah ka shaqeeya, MSF waxaa ay ku dadaaleysaa in ay saameynta ugu weyn uguna degdeg badan ku lahaato yareynta geerida hooyada ee dhacda marka ay jiraan dhibaatooyin bani’aadamnimo, waxaana ay si weyn u maalgelisey kobcinta kartideeda farsamo iyo tan adeeg si ay u bixiso daryeelka degdegga ah ee
uurreyda iyo umulaha oo lacag la’aan ah, nafna lagu badbaadiyo.
“Waa masiibo taagan in aan weli arkeyno haween badan oo umul-raacaya, annaga oo og in daryeel tayo leh oo la bixiyo marka ay hooyadu umuleyso uu saameyn toos ah yeelan karo,” ayaa ay hadalkeeda ku sii dartey Kara Blackburn. “Waa in aan mar kasta xusuusnaanaa in umul-raacu yahay geeri laga baaqsan karo.”
MSF waxaa ay daryeelka uurreyda iyo umulaha ku bixisaa ku dhowaad 30 dal. Sanadkii 2010kii, shaqaalaha MSF waxaa ay ka umuliyeen hooyooyin dhaley carruur ka badan 150,000.
Si aad wareysi ula yeelato af-hayeennada MSF ee caafimaadka haweenka, fadlan Maimouna Jallow kala soo xiriir msf-nairobi-press@msf.org; +254 (0) 722 513 981
Si aad u akhriso warbixinta: International Women\_’s Day 2012 Maternal Death: The avoidable crisis
Farriin ku socota saxaafadda: Fiidiyow-Duuban iyo sawirro ku saabsan hawlaha daryeelka caafimaadka hooyada ee MSF waa la helayaa